शिक्षक::Leading News Portal From Nepal.
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि निजामती कर्मचारी सरह बढुवा हुन पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि शिक्षकलाई बढुवाको व्यवस्था थिएन। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि...
हिजोका शिक्षकबाट भोलीको शिक्षा कसरी निर्माण गर्ने ?
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षकमा सुधार नभएसम्म शिक्षामा सुधार गर्नै नसकिने बताएका छन् । २० वर्ष पुराना शिक्षकले, नयाँ विद्यार्थीलाई सिकाउनै हम्मे हम्मे भईरहेको उनीहरुको भनाइ छ । आजको शिक्षा साप्ताहिकले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहका...
शिक्षकको तलब बृद्धि, कसको कती पुग्यो ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत शिक्षकको तलब वृद्धि गरेको छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब दर्जा अनुसार १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत राजपत्र अनंकिततर्फ २० प्रतिशत र...
केन्याका पीटर टाबीची बने विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षक
केन्याको एक ग्रामिण भेगका विज्ञान शिक्षक विश्वको उत्कृष्ट शिक्षकको रुपमा पुरस्कृत भएका छन् । फ्रान्सिस्कन धर्मका अनुयायी पीटर टाबीचीले एक मिलियन डलर बराबरको पुरस्कार प्राप्त गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उनले आफ्नो तलबको ८०...